नवलपुरमा कारागारमा कैदीबन्दी राख्ने ठाउँ अभावमा १४२ चितवन स्थान्तरण ! - लोकसंवाद
नवलपुरमा कारागारमा कैदीबन्दी राख्ने ठाउँ अभावमा १४२ चितवन स्थान्तरण !
कावासोती । नवलपरासीपूर्व नवलपुरमा कारागार नहुँदा कैदीबन्दी राख्न समस्या भएको हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कैदीबन्दीलाई छिमेकी जिल्लामा रहेको कारागार पठाउनुपर्ने बाध्य भएककाे जनाइएकाे छ ।
नवलपुरबाट चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ६३ कैदीबन्दीलाई चितवन पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मुद्दा फाँटका टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । पोखरेलका अनुसार चार महिला र ५९ पुरुष रहेका छन् । यस्तै गत आर्थिक वर्षमा तीन महिला र १३९ पुरुष गरी १४२ कैदीबन्दीलाई चितवन कारागार पठाइएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।